Eurofighter တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း AlphaSim DOWNLOAD FSX & P3D - Rikoooo
downloads ရယူရန္ 48 824
မှတ်ချက်: အဆိုပါ FS2004 HUD နှင့်ရေဒါနှင့်အတူလိုက်ဖက်မဟုတ် FSX ဒါကြောင့်မပါဝင်ပါ။ တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာအတွက် paste လုပ်ထားတဲ့နိုင်ဒါ panel.cfg setting များကိုရှိနေတုန်းပဲရှိပါတယ်။
အဆိုပါ Eurofighter တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းတစ်ခုအင်ဂျင်နှစ်လုံးတပ်, canard-မြစ်ဝကျွန်းပေါ်တောင်ပံ, ဘက်စုံသုံးတိုက်လေယာဉ်ဖြစ်ပါသည်။   အဆိုပါမုန်တိုင်းဟာဦးပိုင်ကုမ္ပဏီ, Eurofighter GmbH သည်အားဖြင့်ပြုပြင်, သုံးကုမ္ပဏီများ, EADS, Alenia Aeronautica နှင့် BAE Systems ကုမ္ပဏီ၏တစ်ဦးလုပ်ငန်းစုကဒီဇိုင်းခဲ့သည် , 1986 ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့်။ အဆိုပါစီမံကိန်းသည်နေတိုးတပ်ဖွဲ့ Eurofighter နှင့်အဓိကဖောက်သည်အဖြစ်ပြုမူသောလေဆင်နှာမောင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအေဂျင်စီ, ကစီမံခန့်ခွဲသည်။  Eurofighter တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းအ EADS, Alenia Aeronautica နှင့် BAE Systems ကုမ္ပဏီ၏လုပ်ငန်းစုများက serial ကိုထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ အဆိုပါလေယာဉ်သည်အသီးအသီးယေဘုယျအားဖြင့်တိုးတက်လာစွမ်းရည်များနှင့်အတူလေယာဉ်တင်အဘို့, tranches အမည်ရှိသောသီးခြားစာချုပ်များ, အောက်မှာနှင့်ကြဉ်ရှောင်နေပါသည်။ အဆိုပါတိုင်ဖွန်းသြစတြီးယားလေတပ်, အီတလီလေတပ်, ဂျာမန်လေတပ်, ဗြိတိသျှတော်ဝင်လေတပ်, စပိန်လေတပ်နှင့်တော်ဝင်ဆော်ဒီလေတပ်နှင့်အတူဝန်ဆောင်မှုသို့ဝင်ခဲ့သည်။ (ဝီကီပီးဒီးယား)
Speedbrake - အ / key ကိုသုံးခြင်းသို့မဟုတ် panel ကိုနှိပ်ပါ။
ဖွညျးညှငျးစှာရလြှောဆငျးခွငျးသို့ဆွဲချပါ - ၏ 'ပြောင်းပြန်တွန်းကန်အား' 'အင်္ဂါရပ်ကိုအသုံးပြုသည် FSX/P3D, စာနယ်ဇင်းဒါနှင့် F2 သော့ canel မှ F1 key ကိုဖိကိုင်ထားပါ။
ခတ် - အစစ်အမှန်တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကွန်ပျူတာကထိန်းချုပ်ထားသည်၎င်း၏ခတ်မခတ်ခရိုနီသို့မဟုတ်အထွာအ panel ကိုအပေါ်ရှိပါတယ်သိရသည်။ အဆိုပါ AlphaSim မော်ဒယ်ဒီထင်ဟပ်ပေမယ်ခတ်ပုံမှန်အတိုင်း keypresses ကအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သုံးဦးသာခတ်ရာထူးရှိပါတယ် - အပြည့်အဝနှစ်လယ်ပိုင်းတွင်လမ်းဖွင့်နှင့်အပြည့်အဝချ။
လေယာဉ်မှူးက Visors - အနိမ့်အလိုအလြောကျလငျး၌
စုံစမ်းစစ်ဆေးဆီဖြည့ - ဤအရာ 2nd Exit ကို command ကိုအသုံးပြုသည်။ အောက်ပါ keypresses ကိုသုံးပါ (သို့မဟုတ်ကီးဘုတ်တာဝန်တွေအတွက်အခြားအရာတစ်ခုခု (အကြံပြုထားသည်) မှ reset) -
စာနယ်ဇင်းနှင့်တစ်ချိန်က E ကိုသော့ကိုအသာပုတ်ခြင်း, ပြောင်းကုန်ပြီသော့ကိုင်
(အရေးကြီးသော) (အ, E Key ကိုနှိပ်၏2စက္ကန့်အတွင်း) ကိုချက်ချင်း2သော့ကိုအသာပုတ်အပြောင်းကုန်ပြီ key ကိုလွှတ်လိုက်ပါ။
VC ကို Switch - ထို VC အတွက် switches များအပေါငျးတို့သ mousable ဖြစ်ကြပြီးအများဆုံးဖြစ်ပွားမှုအတွင်းတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းမှာတွေ့ရှိအစစ်အမှန်စာသားဖော်ပြချက်သည်းခံကြ၏။ ဤရွေ့ကား switches များ Non-functional ဖြစ်စေသာအကျိုးသက်ရောက်ဘို့ဖြစ်ကြ၏။ တချို့က VC ကိုခလုတ်မ FSX functions များ, ဤဂီယာလီဗာနှင့်ဆင်းသက်အလင်းအိမ်ညာခြမ်း console ကိုအပေါ်ဘယ်ဘက်အခြမ်း console ကိုအပေါ်ကိုပြောင်းသဖြင့်, nav & panel ကိုအလင်း switches များ, လောင်စာဆီ cutoff (အင်ဂျင် shutdown ချ) switch ကိုနှင့်2starter switches များနေကြသည်။
VC ကို အသုံးပြု. shutdown switches - shutdown အ VC အတွက် Right-ဘက် console ကိုအပေါ်ဆီ Cutoff switch ကိုနှိပ်ခြင်းခံရသည်, ထို switch ကိုပထမဦးဆုံးရုပ်သိမ်းခံရဖို့ရှိပါတယ်သည့်အနီရောင်ကိုယ်ရံတော်ရှိပါတယ်။ အင်ဂျင်ဆငျးသကျ spooling သည်တစ်ချိန်က switch ကိုမဟုတ်ရင်ဖြစ်နိုင်မည်မဟုတ်ကို restart လုပ်ပါ, အ ON အနေအထားကိုပြန်သွားပါလုပ်ရမှာ။
VC ကို အသုံးပြု. စတင်ကာ switches - အအသုံးပြုသူလက်ဝဲအထက် panel ကိုအပေါ် AutoStart button ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်းစတင်နိုင်ပါသည်, ဒါမှမဟုတ်နှစ်ခု starter switches တွေ VC အတွက် Right-ဘက် console ကိုအပေါ်ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာသတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်င်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သကဲ့သို့တစ်ဦး) ကိုလောင်စာ shutoff အ ON အနေအထားတွင်ရှိရမည်ဖြစ်ပြီး, ခ) starter switches များထိရောက်စွာရှိပါတယ် '' နွေဦးပေါက်-loaded 'အသုံးပြုသူအင်ဂျင်ဖမ်းမိသည်အထိသူတို့အပျေါမှာ mouse ကို click နှိပ်မကိုင်ဖို့ရှိပါတယ် ဒီသာမန်အားဖြင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ကျင်းပနိုင်ရန်ခန့်6စက္ကန့်ကြာအ switch ကိုကျင်းပလျက်ရှိသည်နေတုန်း, ကို 'လက်' 'pointer ထောက်တစ်ဦး' 'လက်သီး' ဖို့ကိုပြောင်းလဲလိမ့်မယ်။ သငျသညျ6စက္ကန့်ရှေ့တော်၌ထို switch ကိုလွှတ်ပေးရန် အကယ်. ဖွင့်ဖြစ်ပါတယ်, သငျသညျတဖနျလုပ်ထုံးလုပ်နည်း begine ရန်ရှိသည်လိမ့်မည်။ မှတ်ချက်: အ ctrl + shift-F1 keypress ကိုရှေ့မပိတ်ပစ်ရန်အသုံးပြုခဲ့လျှင်အဆိုပါ starter switches တွေအင်ဂျင်စတင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အ VC starter ခလုတ်အသုံးပြုစေလျှင်ထိုအင်ဂျင်အခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာ console ကိုအပေါ်အနီရောင်ပိတ်ခလုတ်သုံးပြီးပိတ်ပစ်သင့်ပါသည်။ သငျသညျ ctrl + shift-F1 အသုံးပြုလိုလျှင်, ctrl +-E ကိုထပ်ဖွင့်ဖွင့်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
နောက်ဘက် cockpit - ထိုလှုပ်ရှားမှုကိုရပ်လိုက်မှီတိုငျအောငျသငျသညျ ctrl + Enter ကိုနှိပ်ခြင်းနှင့်ကိုင်ခြင်းအားဖြင့် VC ၏နောက်ဘက်ကိုစီးနိုင်ပါတယ်။ ထိုအခါပြောင်းကုန်ပြီ-Enter သငျသညျလညျးအနိမ့်ထိုင်လျက်ပါလိမ့်မည်အဖြစ်ရှုမြင်ပုံကိုပြုစုပျိုးထောင်ဖို့ကိုနှိပ်ပါ။ တစ်ခုခုကိုအတိုင်ဖွန်း reselecting သို့မဟုတ်ပြောင်းလဲရန်-နောက်ပြန်မှန်ကန်သောအမြင့်မှဆငျးသကျပြန်ရွှေ့ဖို့ပြီးတော့, တဖနျကို Forward ရွှေ့ဖို့ ctrl +-နောက်ပြန်နှိပ်ခြင်းဖြင့်ပြန်သွားသည်။
Smokesystem: ဘယ်ဘက်ထိပ်ခလုတ်အုပ်စု on / off အဖြူရောင်လေထု display ကိုမီးခိုး toggling များအတွက်ခလုတ်ကိုလည်းရှိ၏။
AI အလေယာဉ် Labels: ကဗျာထိပ်လက်ဝဲခလုတ်အုပ်စု on / off မှာ AI အလေယာဉ်တံဆိပ်များ toggling များအတွက်ခလုတ်ကိုလည်းရှိ၏။ သင်ကခလုတ်ကိုအပေါ်အနီရောင်စာသားကိုပြပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်, သင့် display ကိုရွေးချယ်စရာထားရှိသည်ဆိုပါကဤသည် default အနေဖြင့်ပေါ်သည်။
multiplayer: တစ်အောက်ပိုင်း-Poly ပိုမိုမြင့်မား FPS မော်ဒယ် multiplayer အစည်းအဝေးများအတွက် * ကစားသမားလေယာဉ် * သကဲ့သို့ပျံတစ်ခု option ကိုအဖြစ်ပါဝင်သည်။ ထိုသို့သောအဖြစ် AI အမော်ဒယ်မဟုတ်ပါဘူး။